ဇော်ဂျီ နှင့် ယူနီကုတ် မြန်မာဖောင့် ၂၀၁၄ - Myanmar in Singapore
Posted by ၀တ်မှုန် on September 26, 2011 at 12:00am
ဒီတော့ ယူနီကုတ်ကို ဘယ်နေရာမှာ သုံးကြမလဲ။ ကျွန်တော်တို့လို လူပြိန်း၊ ပညာရှင်မဟုတ်သူများကတော့ အလွယ်တကူ ရိုက်နှိပ်၊ ဖတ်ရှု၊ ကော်ပီပေစ် Copy-Paste လုပ်နိုင်တဲ့ ဇော်ဂျီဖောင့်ကိုပဲ ဆက်လက်သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင် အသိုင်းအဝိုင်းကတော့ ယူနီကုတ်ကို ဆက်လက်မြှင့်တင်ပေးရပါမယ်။ Wikipedia, Feb2014 မှာကြည့်ရင် ယူနီကုတ်နဲ့ဇော်ဂျီ၂ခုမှာ ယူနီကုတ်မှာ အချက်အလက် ပိုစုံလင်လာပါတယ်။ ပညာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းက ယူနီကုတ်ကို အားပေးမြှင့်တင်နေပါတယ်။ မြန်မာယူနီကုတ် သုတေသနပြုခြင်းကို ဂူဂယ်၊ မိုက်ကရိုဆော့ လိုကုမ္ပဏီကြီးများကပဲ ငွေအကုန်ခံ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရက ငွေမရှိတော့၊ မြန်မာသုတေသီများမှာ အပျော်တမ်းအဆင့်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဘာသာပြန်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ မြန်မာပညာရှင်များအနေနဲ့ အဘိဓာန်အဆင့်ပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဂူဂယ်မျာ ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီး အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ စပိန်၊ တရုပ်၊ ဂျပန် စာများကို အရှေ့တောင်အာရှ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား ဘာသာရပ်များကို အောက်ပါ လင့်ခ်မှာ အလွယ်တကူ ဘာသာပြန်နိုင်ပေမဲ့၊ မြန်မာဘာသာလည်း မကြာခင် ရရှိပါမယ်။ စောင့်မျှော်ရန်
Google Search တွင်ဇော်ဂျီဖောင့် မြန်မာ စာလုံးကို ရှာကြည့်ပါက၊ About 2,640,000 ပေါ်လာပါသည်။ ယူနီကုတ်ဖောင့် မွနျမာ စာလုံးကိုရှာကြည့်ပါက (Cut & Paste လုပ်ပါ) About 633,000 results ပေါ်လာပါသည်။ ၂၀၁၁တွင် ဇော်ဂျီက ယူနီကုတ်ထက် ၄ဆမျှ အသုံးများနေကြောင်း သက်သေဖြစ်ပါသည်။ http://www.myanmaritpro.com/forum/topics/nearly-40-of-myanmar-web-pages
ဟုတ်ပါတယ်။ လက်ရေးမြန်မာစာနည်းနဲ့ ကွန်ပြူတာစာလုံးရေးတဲ့ ၀င်းဘားမိစ်၊ ၀င်းအင်းဝ ကနေတဆင့် ဇော်ဂျီ လို ရိုက်ရလွယ်တဲ့ ဖောင့်ပေါ်လာတော့ မြန်မာစာ အင်တာနက်မှာ ကမ္ဘာနဲ့ယှဉ်ဖို့ အလွန်နှေးနေတယ်။ ယူနီကုတ်ကို သုံးဖို့ အာပေါက်အောင်ပြောလဲ ယူနီကုတ်က ရိုက်ရတာခက်တော့ မသုံးကြတာ ၅နှစ်လောက်ကြာနေပြီ။ ယူနီကုတ်မြန်မာစာရိုက်နည်းက ရှေးက အိုလံပီယာလက်နှိပ်စက်ရိုက်တဲ့နည်းစနစ်ကို ပြန်သုံးထားတာကိုး...။ အစိုးရကလည်း အတတ်ပညာဆိုင်ရာ ကိစ္စဆိုတော့ ၀င်မပြောဘူး။ ယူနီကုတ်ကို ပုဂ္ဂလိကပညာရှင် ၂အုပ်စု (ဇော်ဂျီ နဲ့ ယူနီကုတ်) ပြိုင်ဆိုင်နေကြတယ်။ ရိုက်ရတာ လွယ်တော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ဇော်ဂျီပြောင်းသုံးကြတာပဲ...။ အားရင်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ဘယ်ဖောင့်ကို ထောက်ခံမလဲ။ http://www.myanmaritpro.com/profiles/blogs/request-to-all-members
ခက်တာကတော့ ယူနီကုတ် Myanmar Website တွေကို ကြည့်ချင်ရင် Microsoft IE ကိုသုံး၊ ယူနီကုတ် Myanmar Website ကိုကြည့်ချင်ရင် Mozila Firefox ကိုသုံး လုပ်နေရမှာပဲ။ ဇော်ဂျီနဲ့ ကျင့်သားရနေသူများ ဘယ်...လွယ်လွယ်နဲ့ ယူနီကုတ် ရိုက်ရခက်တာကြီးကို သုံးချင်ပါ့မလဲနော်....။ (ယူနီကုတ်ဖောင့်လဲ ..လေ့ကျင့်လျှင် ခဏဆိုရပါသည်)။ လောလောဆယ် နာမည်ကြီးသတင်းဌာန ၀က်ဆိုက်တွေကတော့ ယူနီကုတ်မသုံးကြသေးဘူး....။ မြန်မာအိုင်တီပရိုကတော့ ပညာရှင်များဖြစ်တဲ့အတွက် ယူနီကုတ်ကို ၂၀၁၁ ဇန္တ၀ါရီကစပြီး သုံးချလိုက်ပြီ။ယူနီကုတ် ၀ီကီပီဒီယာ http://my.wikipedia.org/ မှာတော့ အချက်အလက် ၇၂၀၀ ကျော် တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာပါတယ်။ ဇော်ဂျီ ၀ီကီပီဒီယာ http://wikimyanmar.co.cc မှာတော့ ၄၂၃၆ခု ရှိနေပါတယ်။ ယူနီကုတ်ဝီကီမှာ ဖြစ်ရပ်မှန်များစွာ စုပေါင်းရေးထားပါတယ်။ သာမန် Users တွေမှာကြည့်ရင် .. Web Brouser လောကမှာ ၁။ အင်တာနက်အိတ်စပိုရာ IE (36%) ၂။ မိုဇီလာ Mozilla Firefox (24%) ၃၊ ဂူဂယ်ကရုန်း Google Crome (18%)
http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_web_browsers ကျွန်တော်လည်း သာမန် User တစ်ယောက်ဆိုတော့၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေမိပါတယ်...။ လောလောဆယ်တော့ IE နဲ့ ဇော်ဂျီဝက်ဆိုက်တွေကို IE နဲ့သုံး၊ ယူနီကုတ်ဝက်ဆိုက်တွေကို Mozila Firefox နဲ့သုံး .. ခေတ်မနောက်ကျအောင် ခွသုံးရမဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဗျို့......ဒါပေမဲ့ Mizilla .မှာ ဖောာင့်၂ခုစလုံး အလွယ်တကူ ရိုက်လို့ရတဲ့နည်းပေါ်လာပြီပဲ။ နောက်ဆက်တွဲ Update မြန်မာစွယ်စုံကျမ်း Wikipedia ၂မျိုးရှိနေသည်။ ၁။ ယူနီကုတ် (ပိတောက်၊ ပရဗိုက်၊ မြန်မာ(၃) သုံးသော http://my.wikipedia.org ၂။ ဇော်ဂျီသုံးသော http://www.wikimyanmar.co.cc/ တို့ဖြစ်ကြသည်။ အများစုမှာ ဇော်ဂျီဖြင့် စာရိုက်နေကျဖြစ်သောကြောင့်၊ ယူနီကုတ် (လက်နှိပ်စက်နည်း) ကို ကွန်ပြူတာအများစုက မသုံးနိုင်သေးပါ။ ဇော်ဂျီနှင့်ယူနီကုတ် ဖောင့်၂မျိုးစလုံးကို ရိုက်ရန် ၂၀၁၁ အထိ မလွယ်ကူသေးပါ။ အချို့က Web Browser ၂မျိုးသုံ ဖောင့်၂မျိုး စာလုံးရိုက်ကြသည် (IE, Mozzila)၊ ယူနီကုတ်ကို MyanmarITpro.com စသည့်ဝက်ဆိုက်များက ၂၀၁၀ မှစပြီး အားပေးလာသည်။ အင်တာနက်ဝက်ဆိုက်များကလည်း တဖြေးဖြေးနှင့် ယူနီကုတ်သို့ ပြောင်းလာကြသည်။ Mozzila Browser NHM Keyboard သုံးခြင်းဖြင့် ဇော်ဂျီနှင့်ယူနီကုတ် ၅.၂ နှစ်မျိုးစလုံးရနိုင်ပါသည်။ Myanmar3 font ဒေါင်းလုပ်ပါ။ Keyboard Install & Use method ...http://www.myanmarlanguage.org/tools/nhm-keyboard-unicode ဇော်ဂျီအတွက် Alt+Shift, ယူနီကုတ်အတွက် Shift+1 ဖြင့် ၂မျိုးစလုံးရိုက်နိုင်ပါသည်။ ယူနီကုတ်ဝက်ဆိုက်တွင် (ဥပမာ .. ၀ီကီပီဒီယာ my.wikipedia.org) တွင် စာရိုက်လိုပါက၊ ဇော်ဂျီဖြင့်ရိုက်ထားသော စာများကို ဖောင့်ကွန်ဗတ်တာ ဖြင့်ပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။ Online Coverter: http://burglish.my-mm.org/latest/trunk/web/testarea.htm အခြားကွန်ှဗတ်တာ များမှာ
The End..... ၀တ်မှုန်
-- Grace be with you all
Comment by Spring Daisy on October 2, 2011 at 12:00am ဇော်ဂျီက ယူနီကုတ် မဟုတ်ဘူးလား.. သူက အင်စတောရတာလေ. ကီးဘုတ်ရော language ရော.. အဲဒါတောင် ဖောင့်သက်သက်ပဲလား.. ဇော်ဂျီနဲ့ ယူနီကုတ် ကို ကြည့်ရုံနဲ့ ခွဲခြားနိုင်တဲ့ အပေါ်ယံအအခြေအနေကို သိပါရစေ RSS